एभरेस्ट बैंकको रु. ४ करोडको अग्राधिकार सेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुँदै Bizshala -
एभरेस्ट बैंकको रु. ४ करोडको अग्राधिकार सेयर सर्वसाधारणमा परिणत हुँदै
काठमाण्डौ । एभरेस्ट बैंक लिमिटेडले रु. ४ करोडबराबरको अग्राधिकार सेयर सर्वसाधारणसभा परिणत गर्ने भएको छ ।
बैंकले १२ वर्षअघि सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने गरी २० करोड रुपैयाँको अग्राधिकार सेयर निष्कासन गरेको थियो । त्यतिखेर बैंकले हरेक तीन वर्षमा २० प्रतिशतका दरले अग्राधिकार सेयर सर्वसाधारणमा परिणत गर्ने गरी अनुमति पाएको थियो ।
सोहीअनुरुप बैंकले यो वर्ष उक्त मूल्यबराबरको अग्राधिकार सेयर असोज ९ गते सर्वसाधारणका लागि परिणत गर्न लागेको हो । अग्राधिकार सेयरको अन्तिम कारोबार असोज १ गते हुने बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंकले यसअघि तीनपटकमा रु. १२ करोडको अग्राधिकार सेयरलाई सर्वसाधारणमा परिणत गरिसकेको छ । अबको तीन वर्षपछि बैंकले बाँकी रु.४ करोडको साधारण सेयर पूँजीमा परिणत गर्नेछ ।
हाल डिम्याट खातामा कायम रहेको अग्राधिकार सेयरलाई साधारण सेयरमा परिवर्तन गर्नुपूर्व नै पुरानै कित्तामा कारोबार हुने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायमा आवश्यक दर्ता प्रक्रिया पूरा गरी डिम्याट खाताबाट घटाउन वा बढाउने प्रयोजनार्थ असोज २ गतेदेखि असोज ३० गतेसम्म अग्राधिकार सेयरको कारोबार बन्द गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
एचडिएलको सेयर कारोबारमा ‘खेल’, सहकर्मीले पोल लगाएपछि २
काठमाण्डौ । दोस्रो बजारमा हिमालयन डिष्टीलरी लिमीटेड(एचडिएल)को सेयर...
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा आरटीजीएस...
काठमाण्डौ । बुलिस ट्रेन्डमा लम्किरहेको बजार गत सातादेखि नेप्से...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्�...
एनएलजी इन्स्यारेन्सले हकप्रद जारी गर्न एक दिन बुक क्लोज गर्ने
काठमाण्डौ । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद सेयर जारी...
कुमारी बैंकको ऋणपत्रमा खरिद आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । कुमारी बैंक लिमिटेडको ३ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्रमा खरिद...
कृषि विकास बैंकको साढे २ अर्बको ऋणपत्र आजबाट बिक्री खुला, कति
काठमाण्डौ । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले साढे २ अर्बको ऋणपत्र आज...
ब्रोकर नम्बर-१९ ले ३ दिनसम्म कारोबार गर्न नपाउने, करिब ३ हजार
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले ब्रोकर नम्बर १९...